३३ करोडको लागतमा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको चार तले भवन निर्माण हुने «
पोखरा-गण्डकी प्रदेशको पोखरामा गण्डकी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माण हुने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानको लगानीमा आगामी साढे दुई वर्षमा पक्की चार तले भवन निर्माण हुने भएको प्रतिष्ठानका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाले बताए ।
३३ करोेड २१ लाखको लागतमा भुइँतलासहित चार तले भवनमा सभाहलसहित ४६ वटा कोठा हुने उनले जनाए । नगर प्रशिक्षण केन्द्रको उत्त जग्गा प्राप्ति भएसँंगै प्रतिष्ठानले ४९ रोपनी क्षेत्रफलमा उक्त भवनसहितको अन्य भौतिक संरचना गर्ने भएको हो । भुइँतलामा पार्किङ, पहिलो तलामा २ सय ५० जना क्षमताको सभाहल, क्यान्टिन दोसो तलामा कक्षा कोठा रहने छ भने तेस्रो तलामा कार्यालय रहने डा. बानियले बताए । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले रकम सुनिश्चित भएसंँगै डीपीआरसमेत गरेर उक्त भवन निर्माणको काम अघि बढेको उनले दाबी गरे ।
यसैबीच, उक्त भवनको सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्याससमेत गरेका छन् । सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोप ल्याउने, पीसीआर निःशुल्क परीक्षण गर्नेसहित कोरोनाका बिरामीको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको उनले बताए । आफ्नो नेतृत्वको सरकारले थुप्रै काम गरेको ओलीको दाबी थियो ।
स्वच्छ प्रतिष्प्रर्धा गरी एकता भएर हिँड्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय हितमा एक हुन आह्वान गरे । पोखरा र गण्डकी प्रदेश अन्य क्षेत्रभन्दा सौन्दर्यदेखि हरेक हिसाबले अघि भएको दाबी गरेका ओलीले पोखरा आउँदा जो कसैलाई आनन्द आउने हुदा यहाँको सौन्दर्यतामा ख्याल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उत्त प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आफ्नै भवन भनेसंँगै यहाँ धेरै क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादनको थलो हुने गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बताए । कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी, मन्त्रीसहितको सहभागिता रहेको थियो ।